अन्तराष्ट्रिय समाचार – MeroJilla.com
फेसबुक लाइभ गरेर न्यूजिल्याण्डको मस्जिदमा आक्रमण, ३० जनाको मृत्यु Friday, March 15th, 2019
काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चमा अवस्थित दुई मस्जिदमा बन्दुकधारीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । जुमेको नमाज वाचनको समयमा भएको आक्रमणमा बालबालिकासहित कम्तीमा ३० जनाको गोली लागेर ज्यान गएको न्यूजिल्यान्डका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । आक्रमणकारीको गोली लागेर ५० जना घाइते भएका छन् । उनीहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको र केहीको..
इथियोपियन विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकी नेपाली युवती को हुन् ?, भाग्यले बाँचे अर्का नेपाली Monday, March 11th, 2019
फागुन २७ ।मुत्यु हुने नेपालीमा गोरखाकी एकता अधिकारी रहेकी छिन् । इथियोपियाको अदिस अबाबास्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) कार्यालयमा कार्यरत उनी आइतबार डब्लूएफपीकै एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उक्त विमानमार्फत नैरोबी जादै थिइन् । डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेविड बास्लेले पनि आफ्ना कर्मचारी उक्त दुर्घटनामा परेको पुष्टि गरेका छन् । दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमानमा..
प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन गर्ने ! Friday, March 8th, 2019
राउतले पृथकतावादी अभियान परित्याग गर्ने दाबी काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेसको एजेण्डासहित पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउतले अब अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्ने भएका छन् । सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता गरेका सिके राउतले आजैबाट पृथकतावादी गतिविधि परित्याग गर्ने भएका हुन् राउत विहीवार मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए । अपरान्ह १ बजे राष्ट्रियसभागृहबाट..
भाग्य आफ्नो आफ्नो मुकेश अम्बानीको छलाङ, भाइ अनिल भयंकर आर्थिक संकटमा
काठमाडौं । अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले सन् २०१९ को अर्बपतिहरुको सूची सार्वजनिक गर्दा भारत धनाड्य मुकेश अम्बानीले ठूलै छलाङ मारेका छन् । उनी शीर्ष दशबाट अब तीन कदम मात्र पछाडि अर्थात १३ औं नम्बरमा परेका छन् । सन् २०१८ मा मुकेश अम्बानी फोब्सको १९ औं स्थानमा रहेका थिए भने २०१७ मा ३३ औं स्थानमा । तर, यो पटक ६ स्थान माथि उक्लिएका हुन् । यो सूचीमा उनका भाइ अनिल अम्बानी पनि छन्..
अब गन्तब्य जापान सरकारद्धारा जापानी कोर्ष स्पष्ट पार्न आग्रह Tuesday, March 5th, 2019
जापानले नेपाली कामदार मागेसँगै भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले भाषाका नाउँमा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको हो । जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने भनेको छ । हाल जापान पढ्न..
भारतीय पाइलटले सोधे– यो भारत हो कि पाकिस्तान ? दुखद तर रमाइलो कहानी Friday, March 1st, 2019
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतीय वायू सेनाका विङ कमान्डर अभिनन्दन वर्धमानलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै भारतमा खुशी छाएको छ । बुधबार पाकिस्तानले आफ्नो आकाशमा आएको भारतीय विमानलाई आक्रमण गरेको थियो । विमान पाकिस्तानी इलाकामा खसेपछि पाइलट अभिनन्दन पक्राउ परे । तर, उनी पक्राउ पर्दाको विस्तृत विवरण भने बाहिर आएको थिएन । बीबीसीले पाकिस्तान..
सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने Saturday, February 9th, 2019
नयाँ दिल्ली । भारतमा दुई दिनसम्मको लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । चुनाव प्रचारको क्रममा प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया तथा सोशल मिडियाका लागि समेत कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि आयोगले कानून मन्त्रालयको पत्र लेखेको छ । आयोगले आफ्नो पत्रमा लेखिएको छ कि सेक्शन १२६ मा संशोधन गरेर पिपुल्स एक्ट जस्तै प्रिन्ट मिडिया,..
अमेरिकी राष्ट्रपतीमा कमला ह्यारिसद्वारा उम्मेदवारी घोषणा Tuesday, January 22nd, 2019
काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटर कमला ह्यारिसले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीतर्फबाट उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् । उन अमेरिकी मूल्य मान्यताका लागि र आगामी दिनमा अमेरिका आफैँमा भर पर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आफूले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राखेको भिडियो..
इजरायलले नेपाली कामदारको कोटा बढाउने Wednesday, January 16th, 2019
काठमाडौँ- ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाली कामदार मिहेनती, इमान्दार र अनुशासित भएका कारण नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन इजरायल सरकार सकारात्मक भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेन्नी अमेरले आज गर्नुभएको भेटमा नेपाली कामदारलाई थप..
मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउनेमा कुनै सम्झौता हुँदैनः डोनाल्ड ट्रम्प Monday, January 7th, 2019
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने आफ्नो मागमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि चाहिने ५ अर्ब ६० करोड डलर संसद्ले विनियोजन गर्नुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउन आफूले मागेको रकम संसद्ले विनियोजन नगरे राष्ट्रिय आपतकाल लागू गर्ने चेतावनी पनि उनले दोहोर्‍याए..
बंगलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिग विजयी Monday, December 31st, 2018
काठमाडौं । बंगलादेशमा भएको आम निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको पार्टी अवामी लिग प्रचण्ड बहुमतका साथ विजयी भएको छ । हिजो भएको निर्वाचनमा अवामी लिगले आफ्नो पकड पुनः दोहो¥याएको छ । अवामी लिगले ३ सय ८० संसदीय क्षेत्रमध्ये २८१ मा आफ्नो जित दर्ता गर्न सफल भयो । यो संगै प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरक्षित गर्न सफल हुनु भएको छ । तर मुख्य..